Izinwele zezinwele zamadoda: izithombe nemibono yabo bonke ubuso | Amadoda aSitayela
Ukunqunywa kwezinwele okuphelile kube phakathi kokuthandwa kakhulu amashumi eminyaka. Njengoba kuyinto yakudala yangempela yezinwele zamadoda, Ukubheja okuphephile uma kukhulunywa ngokuthola izinwele.
Futhi izinzuzo eziningi: Uma kuqhathaniswa nezinye izinwele, i-gradient isebenza kahle ngabo bonke ubujamo bobuso. Ngaphezu kwalokho, kuvame ukuhlukaniswa ngaphakathi kwezinwele eziphansi zesondlo. Okusho ukuthi ukuwasha, ukomisa kanye nesitayela kuthatha isikhathi esincane nomzamo. Kuwufanele kakhulu ukukucabangela uma ungomunye walabo abadinga ukuba lihle ngomzuzwana ekuseni.
1 Ungayithola kanjani i-gradient yakudala
2 Ungayivumelanisa kanjani nesimo sobuso bakho
2.2 Ubuso obuyindilinga
3 Ukugunda izinwele kwe-gradient kwabesilisa abanezinwele ezinhle
Ungayithola kanjani i-gradient yakudala
Kuma-gradients, i-nape nezinhlangothi kusala kufushane. Konke okunye kuhamba isikhathi eside njengoba sisondela phezulu kwekhanda. Ukuma kwayo kufinyelela kokuthandwa ngumuntu ngamunye. Imfihlo yokwenza isebenze ngokuphelele ukubheka ukwakheka kobuso lapho kwenziwa konke ukuhluka okungenziwa. Ngakho-ke, ungakhetha kokukhethwa kukho okuningi okuphezulu: ukuhlukaniswa ohlangothini, izinwele zangemuva, ngama-bangs, nge-toupee, spiky, mess mess, and short, njll
Uma ufuna i-gradient yesikole esidala, kubaluleke kakhulu ukuthi umphumela ungokwemvelo ngangokunokwenzeka. Lokhu kusho ukuthi akudingeki ukuthi kube nokuqhathanisa okuqinile phakathi kwezindawo ezahlukahlukene zokusika. Omunye umthetho wesithupha akumele uqale i-gradient iphakeme kakhulu ngemuva kwekhanda. Ochwepheshe bakhomba ithambo le-occipital (ipuleti elenza ingxenye engezansi naphakathi kogebhezi lwangemuva) njengesiqalo ukuze ukugunda izinwele okuphelile kungabi yindlela yokuhamba. Ngemuva kwalokho, futhi ngokungafani ne-undercut, ubude buyakhula ngendlela ebushelelezi futhi ehambisanayo njengoba sinyusa ukhakhayi.
Ifilimu nethelevishini kumele omunye wemithombo engcono kakhulu yokukhuthazwa kwezinwele, futhi uma kukhulunywa ngama-gradients, akukho okuhlukile. Kulula kakhulu ukuthola izinkomba, ezinye zazo zimnandi, njengoba kunjalo nochungechunge lwabameli, 'Amasudi'. Abalingisi be-'Suits '(uGabriel Macht noPatrick J. Adams) bezinwele ezinhle kakhulu ukufanisa izingubo zabo ezifashisayo.
Ungayivumelanisa kanjani nesimo sobuso bakho
Uma unobuso obu-oval, kusho ukuthi bulinganiselwe ngokuphelele. Ngakho-ke ungakwazi ukukhokhela noma yiluphi uhlobo lokugunda izinwele lwe-gradient, ngisho nesitayela sezempi esikhomba izici zakho.
Kulokhu, iyashunqulwa noma ifushaniswe phezulu, kusetshenziswa isikele uma kudingeka umphumela onolaka omncane. Lokhu kuvumela ukuthi isiqeshana sokuqhafaza sidlule kuqala siye kwababili bese kuthi, emaceleni nasentanyeni, siye kokunye, singayeki ukuba semvelo. Ungaphinda uqedele i-gradient kuya ku-zero ngemiphumela engakholeki. Osaziwayo abanjengoJamie Foxx noma uWill Smith bayizibonelo ezithile. Noma ngabe ufuna isitayela sezempi noma ukhetha okuthile okude, cabanga ukusula ibunzi lakho. Lokho kuzogcizelela ukwakheka kwethambo lakho, okuhlale kungumbono omuhle ngaso sonke isikhathi.
Ukhiye wokunciphisa ukuzungeza kobuso ngokunqunywa kwezinwele kwe-gradient ukuthola isimo esibukhali, kepha ngaphandle kokulahlekelwa ibhalansi. Uma lolu hlobo lobuso bakho cabanga ukugcina izinhlangothi zifushane kakhulu futhi unikeze phezulu ukuphakama okuningi. Cela umgundi wakho ukuthi angazisiki lapho egijimisa isiqeshana esifushane kakhulu ezinhlangothini. Futhi, ukuqala ukuthweswa iziqu phezulu phezulu nape nasezinhlangothini nakho kuyasiza ukunciphisa ubuso.
Uma unobuso obude, gwema ukugunda izinwele okufiphele okufushane kakhulu ezinhlangothini. Okufanelekile, sebenzisa isikele. Umphumela omuhle ungatholakala futhi ngesiqeshana sezinwele ngokulungisa ingxenye engezansi yamathempeli njengomugqa obomvu. Ukusika ezinye izinwele ngezendlalelo ngesikele, ngenkathi ugcina okuphezulu ngobude, nokugwema ukusula ngokuphelele isiphongo eminye imininingwane ethathwa njengokuthopha kwalolu hlobo lobuso.
Ukugunda izinwele kwe-gradient kwabesilisa abanezinwele ezinhle
Ukugunda izinwele kwe-gradient kusebenza kahle emadodeni anezinwele ezinhle. Isihluthulelo ukukhuphula phezulu. Ukwenza lokhu, kuyasikwa (izingidi ezinde zandisa isisindo sezinwele) ngenkathi sizinika ukuthungwa. Ukuze uyenze isitayela, cabanga ngomshini ofundwayo othopha ukwakheka kobuso, njengalowo osemfanekisweni ongenhla. Lapho usetha isitayela sakho, gwema imikhiqizo esindayo esiza ukwenza izinwele zakho zibukeke zizacile futhi zihlwempu. Esikhundleni salokho cabanga ngama-wax ayimpuphu, anika umzimba futhi aqede matte.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Izitayela zezinwele » Izinwele zezinwele zamadoda